Kasco Golf: Shirkadda, Naadiyada, Meesha laga Helo
Cayaaraha Qalabka & Qalabka
Kasco Golf: Macluumaadka Shirkadda, Naadiyada iyo Meesha Laga Helo
Kasco Golf waa naadi golf iyo qalab soo saaraha ah oo ku yaala Japan. Websaydhka caalamiga ah ee Kasco wuxuu ku yaalaa kascogolf.com.
Kasco waa hay'ad hoos timaada shirkadda Japanese Mamiya-OP. Aqoonsiga magaca Mamiya? Qaar kale oo ka mid ah shirkadaheeda waa shey-caan bixiyaha golfka si fiican loo yaqaan, USTMamiya.
Halkee ku yaalaan Kuleejooyinka Golf ee Kasco iyo Qalabka?
Thanks to the internet, golfers aduunka oo dhan ayaa iibsan kara naadiyada iyo qalabka Kasco.
Tusaale ahaan, Kasco waxay iibisaa macaamiisha.
Naadiyada kubbadda cagta ee Kasco waxaa lagu iibiyaa dukaamada tikidhada ah iyo kuwa dukaamada ee Japan, Shiinaha iyo dalal badan oo ka socda Koonfur Bari Asia, iyo sidoo kale wadamo badan oo Europe ah (oo ay ku jiraan UK, France iyo Germany).
Kasco hadda ma laha joogitaan muuqaal ah oo ka jira Mareykanka, inkastoo ay hore u jirtay.
Qalabkee Qalabkee Kasco-ga ah?
Kasco waxkasta oo wax badan oo kala duwan leh:
Naadi dhamaystiran oo naadiyo ah: Darawaliinta, Qoryaha, Beelaha, Dhalooyinka, Kursiga iyo Beelaha, iyo qaar ka mid ah naadiyada lagu bartilmaameedsado haweenka golfers;
Kubadaha golaha (midabyo kala duwan, iyo qaar ka mid ah kuwa la soo fool leh waji);
Qalabyada sida golaha golf, bacaha iyo dalladaha;
Dharka golaha, roobka iyo dabaysha, koofiyadaha, suumanka.
Taariikh Kooban ee Golf ee Kasco
Asalka Golf ee Kasco wuxuu raadiyaa gacan gashi. Gacmo galmo, laakiin gacmo gashiga rasmiga ah ee dumarka. Kasco waxaa la aasaasay sannadkii 1959 si loo soo saaro galoofyada rasmiga ah. Waxaa loo rogay galoofyada ciyaaraha fudud dhawr sano kadib, waxaana bilaabay samaynta iyo iibinta gacan-gashiga golf-ka ee Japan 1964-dii markii lagu magacaabo "Kamatari Sports Company".
Soo-saarista gacmo-gashiga goluhu wuxuu bilaabmey 1965-dii, 1972-kii magaca calaamadana waxaa loo badalay Kasco (oo laga soo gaabiyo shirkadda Kamatari Sports Company).
Shirkaddu waxay sii waday gacan-gashin loogu talagalay isboortiyada kale, sidoo kale, sida bowling iyo baseball, laakiin ballaarinta deeqda golf waxay bilowday si aad ah ugu fiicneyd 1980-tameeyadii.
Kasco koobkii ugu horeeyay ee golfu waxay timid 1980; markii ugu horeysay ee kubbada cagta ee 1982.
Soo saarista xariiqda koowaad ee kooxaha kubada cagta ee Kasco waxay bilaabantay sanadkii 1991, kooxdii ugu horeysay ee kooxda Kasco waxay ka soo baxday jasiiradaha Japan sanadkii 1992.
Kasco markii ugu horeysay ee la isticmaalo oo lagu magacaabo "Super Hyten" ee naadiyada golf wuxuu ahaa 1994; shirkadu waxay sii waday tayada iyo wanaajinta ciriiriga sanadihii la soo dhaafay waxaana qaar ka mid ah kooxo ka tirsan kooxda Kasco ay wali ku jiraan jiilalka danbe ee Super Hyten.
Kasco ayaa sidoo kale la ogaaday bilowgii 2000-maadkii kooxaheeda adeegga - waxa aan ugu yeeri laheyn naadiyada maanta ee isbahaysiga - oo ah kii ugu horreeyay ee la soo bandhigay 1999-kii. Kasco wuxuu ka mid ahaa shirkadihii ugu horreeyay ee magac u sameeya magacyadooda iyo shirkad ayaa naadiyada Mareykanka u keenay dhowr sanadood wakhtigaas.
Sanadkii 2003, About.com Golf ayaa dib u eegay kooxda Kasco's K2K E-Spec Utility Club, waxaanan ku qoray "Waxaan ku dhuftay koox ka mid ah jinsiyadaha , rukummada sanduuqa buuxa, xargaha cantoobada ah iyo qoto dheer, : duulimaad ballaaran, duulimaad toos ah, ciriiri jilicsan, waxaan kooxda ku dhuftey fareem, waxaana ka sii fiicneyd. "
Mamiya-OP waxay kasbatay Kasco oo ah shirkad hoos timaad 2010.
Sida loola xiriiro Golf ee Kasco
Ka bilow bogga shabakadda caalamiga ah ee kascogolf.com. Si aad u soo dirto email, guji 'Contact Us' tab.
Riix 'Tababarayaasha' tab si aad u aragto goobaha, cinwaanka boostada, lambarrada taleefoonka iyo, mararka qaarkood, bogagga shabakadaha ee Kasco ee Aasiya iyo Yurub.
Qaadashadu waa Qalab Qalab Qalal Qulqulaya oo Weyn
Sidee Loo Hubiyaa Jeex-Jeexista Wear iyo Jeexitaan
Ma u baahan tahay inaad xiratid qalabka elektarooniga ah ee lagu ciyaaro Golf?
Sannadka 10aad ee Skateboard Truck ee 2018
Cleveland Mashie Review: Waxqabadka fiican ee ka muuqda
Wilson Hope Haweenka Golfka
Fikradaha Qalabka Golf: Wanaag, Bad iyo Dabeyli
Isku Dajinta Bustaha Qalabka ah si aad u keento Safaradaaga Kayaking
Golf Qeybaha: Jawaabida Qaar ka mid ah Su'aalo Sare ah oo ku saabsan Qeybaha Naadiyada
Gargaarkaaga Gaarka ah
Teelasha Golf: Taariikhda Khiyaaliga ah ee Qalabka Miisaaniyadda
Barashada Awoodda Waxbarashada Guitar
Warqadda Xisaabta 2: Ujeeddada Qoraha
Shanaad Waalidiinta Faro-Furayaasha ah
Samee Beerta Xudduudaha Botanical Tree
Calanka Caalamiga ah ee Calaamadda Bilaha ah
Venus Figurines sida farshaxanka farshaxanka ee dadweynaha
10 Xaqiiqda degdega ku saabsan Amphibians
Jadwalka Wajiga ee Kooban - Print Edition
Sida Loo Waydiiyo Kordhinta Qoraalka Kulliyadda
Goobta Roobka ee 1605: Henry Garnet iyo jesuits
Jarmalka iyo Ingiriis Lyrics for Falco's Biggest Hits
Maxay ahayd Mfecane ee Koonfur Afrika?
Dhacdooyinka ugu fiican ee Star Trek: Jiilka soo socda
Waa maxay maaddada Muratic?
12 Waraaqaha Farshaxanka leh ee ku saabsan iyo ku saabsan Haweenka
10 Qodobada Xeerarka iyo Dhaqanka ee Kulankaaga Koowaad ee Golf
Imtixaanka Gawaarida Gawaarida iyo Baarista Gawaarida
Dagaalkii koowaad ee Marne
JonBenet Ramsey Baaritaan
Haweenka Sayniska Qof walba waa inuu ogyahay
Galmada iyo Qeybaha Magaalada
Utahraptor iyo Iguanodon - Ayaa Ku Guulaystay?
Waa Maxay Britila (Bris)?
Hawlaha Habka Dejinta ee Shabakada - Sidee buu Boggaas Arkeological Sites ugu Leedahay?
Miro: Qaamuuska Jasiiradda
Afka Isbaanishka iyo Cibaadada Isticmaalka 'Tener'
Marka la calaamadeynayo cunsaanimada ma shaqeynayo
Dagaalkii labaad ee Britain ee Afqanistaan ​​waxaa soo xaadiray Miscalculations iyo Heroics